Handray voalohany ny “Star Tour” i Toamasina | NewsMada
Efa tamin’ny 5 taona lasa no nisy “THB Tour” farany tany Toamasina. Fantatra kosa izao fa sambany handray ny “Star Tour” ny any an-toerana, araka ny fampahafantarana nataon’ny tompon’andraikitra, omaly, tetsy amin’ny foiben’ny orinasa Star etsy Andraharo.
“Efa ela tokoa no tsy nisy ny hetsika noho ny antony samihafa. Efa feno izao ny fepetra hahafahana manao fety anatin’ny filaminana tanteraka”, hoy ny nambaran-dRaharimanjato John, tompon’andraikitry ny fikarakarana.
Araka izany, hotontosaina, ny zoma 27 jolay hatramin’ny alahady 29 jolay, ny “Star Tour”, eny amin’ny torapasika manoloana ny Auximad. Ho hita eny an-toerana avokoa ny rehetra ahafantarana ny “Star Tour”: fifaninanaa “karaoke” sy “cove”r, “miss” sy “mister”, “zumba”, ny fanentanana sy lalao hataon’i Barhone sy i Honorat fa indrindra ny fampisehoana goavana.
Fantatra fa hifandimby an-tsehatra, ny asabotsy hariva, ry Welvi Wawes sy ry Shyn. Handimby azy ireo, ny alahady, kosa i Big MJ sy i Joudas. “Efa nisy ny fakan-kevitra natao mialoha tany an-toerana ka anisan’ny mpanakanto andrasan’ny mpankafy ireo”, hoy ny fanazavana nomen-dRandriambolamanana Seheno. Mazava ho azy fa maimaimpoana avokoa ny seho kanefa ho voaaro tanteraka ny toerana ho fitandroana ny filaminana.